शरीरलाई किन र कति चाहिन्छ प्रोटिन ? – Health Post Nepal
शरीरलाई किन र कति चाहिन्छ प्रोटिन ?
२०७५ फागुन ५ गते १८:५९
पोषण मानव शरीरका लागि नभइनहुने तत्व हो । खाद्यपदार्थ र पोषणमा फरकपन पाउन सकिन्छ । मानिसले खाने सम्पूर्ण पदार्थ खाद्यवस्तु हुन् । ती खाद्यवस्तुमा अन्तर्निहित गुणलाई पौष्टिक तत्व भन्ने गरिन्छ ।
मानिसले खाएको खाना उसको शरीरमा गएपश्चात् पौष्टिक तत्वमा परिणत हुन्छ । प्रोटिन कार्बन, अक्सिजन, नाइट्रोजनलगायत तत्व मिलेर बनेको प्रांगारिक पदार्थ हो । कुनै–कुनैमा सल्फर र फस्फोरस मिलेर पनि बनेको हुन्छ । धेरै प्रकारका एमिनो एसिडहरू मिलेर प्रोटिन बनेको हुन्छ । मानव शरीरमा गइसकेपश्चात् प्रोटिन एमिनो एसिडमा परिणत हुने गर्छ । प्रोटिनले मानव शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्नुका साथै धेरै प्रकारका इन्जाइमहरू बनाउने काम गर्छ ।
प्रोटिन पाइने खानेकुराका विभिन्न स्रोतमध्ये जनावरजन्य पदार्थ महत्वपूर्ण स्रोत हो । यसमा माछा, मासु, दूध, दहीलगायत पदार्थ पर्छन् । त्यसैगरी कृषिजन्य पदार्थमा चामल, मकै, गहुँ, कोदो, फापरलगायत खाद्य पदार्थमा पनि प्रोटिन पाउन सकिन्छ । कृषिजन्य उत्पादनमा मुख्यतया गेडागुडी, दाललगायतमा प्रोटिनको मात्रा प्रशस्त पाइन्छ । गेडागुडीमा पनि मुख्यतया भटमासमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाउन सकिन्छ ।
मानिसलाई शरीरको प्रतिकिलो तौलबराबर १ ग्राम प्रोटिनको मात्रा आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि स्तनपान गराइरहेकी महिला, गर्भवती तथा बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि सामान्य मानिसभन्दा धेरै प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । मानव शरीरका विभिन्न अंगहरू प्रोटिनबाटै बनेका हुन्छन् ।
ड्राई फुटहरू काजु, बदाम, ओखर, नरिवललगायतमा पनि प्रोटिनको मात्रा प्रशस्त हुन्छ । मानिसलाई शरीरको प्रतिकिलो तौलबराबर १ ग्राम प्रोटिनको मात्रा आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि स्तनपान गराइरहेकी महिला, गर्भवती तथा बढ्दो उमेरका बालबालिकाका लागि सामान्य मानिसभन्दा धेरै प्रोटिन आवश्यक हुन्छ । मानव शरीरका विभिन्न अंगहरू प्रोटिनबाटै बनेका हुन्छन् ।
प्रोटिनको अभावमा मानव शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्या देखापर्ने गर्छन् । बच्चादेखि प्रोटिनको अभाव भएमा कसिअरकर भन्ने रोग लाग्ने गर्छ । प्रोटिनको अभावमा बच्चामा शरीरमा पानी भरिने, लोसे हुने, सुकेनास लाग्नेजस्ता समस्या देखापर्ने गर्छन् । वयष्कहरूमा प्रोटिनको कमी भएमा हड्डीहरू सुक्ने, सिथिल हुनेजस्ता समस्या देखापर्ने गर्छन् ।
नेपालमा मानिसहरूले प्रोटिनयुक्त पदार्थको सेवन प्रशस्त मात्रामा गरेको पाइए पनि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ भने न्यून नै पाइएको छ । कतिपय नेपालीले आवश्यकताभन्दा पनि बढी मात्रामा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खाने गरेको अवस्था छ भने कतिपयले आवश्यक मात्रामा पनि प्रोटिनयुक्त खानेकुरा नखाने गरेको पाइएको छ । कतिपयलाई खानेकुराको मात्रा कसरी सन्तुलित राख्ने भन्ने ज्ञान नभएका कारण शरीरमा प्रोटिनको मात्रा न्यून हुने गरेको छ भने कतिपयको प्रोटिनयुक्त खानेकुरा पहुँचभित्रै नहुने गरेका कारण उनीहरूको शरीरमा प्रोटिनको मात्रा कमी हुने गरेको छ । शरीरमा प्रोटिनको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी भएमा युरिक एसिडलगायत मिर्गौलाका समस्या देखापर्ने गर्छन् । आवश्यकताभन्दा बढी प्रोटिनले शरीरमा बाथरोगसमेत लाग्छ ।
शारीरिक रूपमा बढी परिश्रम गर्ने मानिसलाई कम परिश्रम गर्नेको तुलनामा प्रोटिनको मात्रा बढी आवश्यक पर्छ । तर, शारीरिक रूपमा बढी परिश्रम गर्नेलाई जसरी कार्बाेहाइड्रेटको मात्रा बढी आवश्यक पर्छ, प्रोटिनको मात्रा भने त्यस्तो हुँदैन ।
एकदिन खाएको खानाबाट प्रोटिनको मात्रा सञ्चय गरेर राख्न मिल्दैन । मानिसको शरीरमा दैनिक रूपमा अत्यावश्यक प्रोटिनको मात्रा पूरा गर्न दैनिक रूपमै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ । मानव शरीरमा जसरी कार्बाेहाइड्रेट तथा चिल्लोपदार्थ सञ्चय गर्न मिल्छ, त्यसरी प्रोटिन सञ्चय गर्न मिल्दैन ।
एउटा वयष्क मानिसलाई दैनिक करिब २ हजार २ सय ६५ ग्राम क्यालोरी आवश्यक पर्छ । मानव शरीरलाई प्रायः कार्बाेहाइड्रेट र चिल्लोपदार्थले शक्ति प्रदान गर्ने भए पनि यी दुई पोषकतत्वले मानव शरीरलाई प्रोटिन दिन नसकेको खण्डमा प्रोटिनले पनि शरीरलाई शक्ति दिने काम गरेको हुन्छ ।
महँगा–महँगा प्रोटिनका स्रोत भएका खाद्यवस्तुहरू प्रत्येक नेपालीको पहुँचमा नहुन पनि सक्छन् । यसको विकल्पका रूपमा हाम्रै वरिपरि पाइने खानेकुरालाई मिलाएर खाएमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाउन सकिन्छ ।
प्रोटिनका स्रोत र पूर्ण प्रोटिन
मानव शरीरका लागि आवश्यक पूर्ण प्रोटिन जनावरजन्य वस्तुहरूमा पाइन्छ । त्यसमा पनि अण्डाको पहेँलो भागमा प्रोटिनको मात्रा धेरै नै हुन्छ । दाल र भात खाने नेपाली परम्परा एकदमै वैज्ञानिक छ । दालमा प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन तथा भातमा कार्बाेहाइड्रेट पाइने भएकाले यो प्रचलन वैज्ञानिक छ । दाल र भात मिलेपश्चात् पूर्ण प्रोटिन बन्छ ।
अन्न र गेडागुडी मिलाएर खाएको खण्डमा पूर्ण प्रोटिन बन्छ । भटमासमा माछामासुमा भन्दा पनि बढी मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । भटमास खाने मानिसले माछामासु नखाए पनि उसले प्रशस्त मात्रामा प्रोटिन पाउन सक्छ ।
बजारमा किनिने फलफूलभन्दा मानिसले आफैँले करेसाबारीमा फलाएको फलफूल खानु बढी राम्रो हुन्छ । बजारमा किनिने महँगा फलफूलभन्दा त्यस्ता फलफूलमा बढी मात्रामा पौष्टिक तत्व पाउन सकिन्छ । बजारमा पाइने आकर्षक प्रकारका फलफूल खाएमा मात्रै पौष्टिक तत्व पाइन्छ भन्ने आमधारणा एकदमै गलत छ ।
एकदिन खाएको खानाबाट प्रोटिनको मात्रा सञ्चय गरेर राख्न मिल्दैन । मानिसको शरीरमा दैनिक रूपमा अत्यावश्यक प्रोटिनको मात्रा पूरा गर्न दैनिक रूपमै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ । मानव शरीरमा जसरी कार्बाेहाइड्रेट तथा चिल्लोपदार्थ सञ्चय गर्न मिल्छ, त्यसरी प्रोटिन सञ्चय गर्न मिल्दैन । जसरी कार्बाेहाइड्रेट र चिल्लोपदार्थ बोसोका रूपमा सञ्चय भएर रहन्छन्, प्रोटिन त्यसरी नरही पिसाबका रूपमा बाहिर निस्कन्छ ।
केमा कति प्रतिशत प्रोटिन ?
खैरो रङको चामलमा प्रोटिनको मात्रा बढी हुने गर्छ । चामलमा ६ प्रतिशत, मकैमा ११ प्रतिशत, गहुँमा ११ प्रतिशत, जौमा १३ प्रतिशत, मासको दालमा २४ प्रतिशत, मुसुरोको दालमा २५ प्रतिशत, माछामा २१ प्रतिशत प्रोटिनको मात्रा रहेको हुन्छ ।